RASMI: Xiddig hore Real Madrid iyo xulka Holand oo ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 13 Agoosto 2019. Xiddig hore kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan ayaa si rasmi ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta.
Halyeeygii hore kooxaha Ajax, Real Madrid, Inter Milan iyo xulka qaranka Holand ee Wesley Sneijder ayaa si rasmi ah uga fariistay kubadda cagta, kaddib muddo dheer ee xirfadiisa ciyaareed, isla markaana ay ka buuxaan guulo iyo koobab badan.
Ku dhawaaqista Wesley Sneijder ee ah inuu ka fariisatay kubadda cagta, ayaa waxay imaaneysaa kaddib markii uu booqday kooxda FC Utrecht, halkaasoo ahayd magaaladii uu ku dhashay xiddigii hore kooxaha Ajax, Real Madrid iyo Inter Milan.
Wesley Sneijder oo haatan 35 jir ah ayaa sheegay:
“Waxaan si rasmi ah u joojiyay ciyaarista kubadda cagta, kani waa go’aankeyga iyo hadalkeyga ugu dambeeya”.
Si kastaba ha noqotee, Wesley Sneijder ayaa ah mid ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsaneyd ee soo martay taariikhda xulka qaranka Netherlands, waxa uu xulka qarankiisa kala qeyb galay 134 kulan, isagoo kulankiisii ugu dambeeyay uu u ciyaaray bishii Sebtember ee lasoo dhaafay kaasoo ay ku wajaheen xulka Peru.